Top 8 dầu gội cặp tốt nhất dành cho phái nữ bán chạy nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 8 dầu gội cặp tốt nhất dành cho phái nữ bán chạy nhất | Muasalebang in Muasalebang
Kungabonakala ukuthi, ngaphezu kokunakekela isikhumba, ukunakekela izinwele nakho kuwumsebenzi obaluleke kakhulu. Akukhona lokho kuphela, esikhundleni sokuchitha isikhathi esiningi ufukamela futhi ushise izinwele zakho, ungazikhethela umugqa we-shampoo yekhwalithi enhle ne-conditioner. Ngakho-ke, manje abantu abaningi baye bakhetha ukusebenzisa i-shampoo pair. Ukuqonda lokhu, isihloko esilandelayo sizokwethula Ama-shampoos aphezulu angu-8 angcono kakhulu kwabesifazane.
1 Iyini i-shampoo yepheya?
2 Ingabe kufanele ngisebenzise i-shampoo yepheya?
3 Ukubuyekezwa kwemikhiqizo ye-shampoo engu-8 ehamba phambili okufanele uyithenge
3.1 3.1 I-Red Tigi Pair Amafutha
3.2 3.2 I-Weilaiya Ginger Shampoo kanye ne-Conditioner
3.3 3.3 Ipheya le-Biotin Collagen Shampoo – I-Collagen Pair Shampoo
3.4 3.4 I-Salon Link I-shampoo eyengeziwe yezinwele ezomile
3.5 I-3.5 HS Pair Shampoo
3.6 3.6 I-Grapefruit Valert Grapefruit Shampoo
3.7 3.7 I-BEAUA ibhangqa i-shampoo enomnqumo ne-argan extracts
3.8 3.8 YENZA I-Pair Shampoo
Iyini i-shampoo yepheya?
Eqinisweni, i-shampoo ebhangqa isethi yama-shampoos, lapho kuzoba khona imikhiqizo ye-shampoo ne-conditioner yezinwele ezinephunga elifanayo nokusetshenziswa okuhambisanayo. Ngaphezu kwalokho, ama-shampoos amabili manje athandwa kakhulu. Mhlawumbe ngenxa yokuthi izinzuzo zihambisana kahle uma kuziwa ekunakekelweni kwezinwele. Ngaleyo ndlela, ukusiza inqubo yokubuyisela izinwele ukuba ibe ephelele kakhulu.
Ingabe kufanele ngisebenzise i-shampoo yepheya?
Kungabonakala ukuthi, okwamanje, ukusetshenziswa kwe-shampoo sekudume kakhulu futhi kancane kancane kungena esikhundleni sama-shampoos avamile. Kodwa-ke, kusekhona abanye abantu abazibuza ukuthi basebenzise i-shampoo ye-pair noma cha? Ukuze siphendule lokhu ngokuqondile, ake sithole amaphuzu avelele e-shampoo ebhangqwa.
Okokuqala, kuma-shampoos avamile, ihlanza kuphela futhi ibuyisele izinwele endaweni okwesikhashana. Ngokuqondene nemikhiqizo ye-shampoo, izokwazi ukufaka ngokugcwele izakhi ezidingekayo zezinwele. Ngenxa yalokho, i-shampoo izokwenza izinwele zithambe futhi zicwebezele zibe nempilo enhle. Ngesikhathi esifanayo, izinwele zakho nazo zondliwa kusukela ekujuleni kwangaphakathi.
Ngaphezu kwalokho, izinhlanganisela zabo zizodala isendlalelo esiqinile sokuzivikela kanye nokuqinisa ukumelana kwezinwele zakho. Ngakho-ke, akusadingeki ukhathazeke ngokuthi izinwele zakho zonakaliswa yimiphumela yemvelo. Ngaphezu kwalokho, iphinde isize abasebenzisi ukuthi banciphise ukulahleka kwezinwele futhi ikhuthaze ukukhula kwezinwele ngokushesha. Ngaphezu kwakho konke, kuzosiza izinwele zakho zigcine umbala wazo kangcono.
Kodwa-ke, okwamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo ye-shampoo yemikhiqizo ehlukene. Ngaphandle kwalokho, kukhona namacala ezimpahla zomgunyathi, izimpahla zokulingisa, izimpahla ezisezingeni eliphansi. Ngakho-ke, kufanele ukhethe ikheli elihloniphekile ukuze uthenge imikhiqizo yangempela.
Ukubuyekezwa kwemikhiqizo ye-shampoo engu-8 ehamba phambili okufanele uyithenge
Ukuze uthuthukise izinwele ezipholile, eziphukile, kufanele ukhethe ama-shampoos njengesixazululo esingcono kakhulu. Ngakho-ke, nazi izinhlobo ezidume kakhulu ze-shampoo yemibhangqwana, sicela ubhekisele kuyo.
3.1 I-Red Tigi Pair Amafutha
Eyokuqala kwabayi-8 abahamba phambili be-shampoo yabesifazane ngo-2021 i-shampoo ebomvu ye-Tigi. Ukusetshenziswa kwebhodlela elibomvu le-shampoo ye-shampoo ye-Tigi Bed Head kusiza ukuhlanza isikhumba sekhanda, ukususa konke ukungcola kanye nomjuluko kanye ne-sebum yesikhumba esinamafutha ahlanzekile.
Ngokuphathelene nokubunjwa kwesethi ye-shampoo ebomvu ye-Tigi, kukhona amavithamini, amaprotheni, i-elastin, i-silicone ne-moisturizing essences. Yilezi zithako ezizosiza ukubuyisela izinwele ezilimele, zondle izinwele eziqinile futhi ezicwebezelayo.
Ngaphezu kwalokho, i-micro-silicon nanoparticle complex inamathela ezinweleni. Ngaleyo ndlela, kwakheka umuzwa wezinwele eziqinile, eziminyene ngaphandle kokunamathela. Ikakhulukazi, i-shampoo ye-Red Tigi Bed Head Elastic Hair Strength ifaneleka ukusetshenziswa ezinweleni ezilimele, ezomile kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 980,000 VND/set umthamo 750ml/ibhodlela.
3.2 I-Weilaiya Ginger Shampoo kanye ne-Conditioner
Umkhiqizo olandelayo wokunakekelwa kwezinwele ovela e-Hong Kong obudume kakhulu kwabesifazane eminyakeni yamuva nje isethi ye-shampoo ye-ginger conditioner ye-Weilaiya. Ngaphezu kwalokho, I-shampoo ye-ginger conditioner ye-Weilaiya Ikhishwe ku-ginger entsha, ihlanza i-dandruff, ifudumeza isikhumba esinamafutha futhi ikhuthaze ukukhula kwezinwele. Ngakho-ke, ukunciphisa ukwakheka kwezifo ze-scalp ezifana ne-seborrheic dermatitis noma i-scalp fungus.
Akukhona lokho kuphela, ukukhishwa kwe-Ha Thu O ku-Weilaiya ginger shampoo kusiza ukwenza izinwele zibe mnyama, zondle izinwele kusuka empandeni kuye phezulu. Ikakhulukazi, isithako samafutha omnqumo sinikeza umswakama obalulekile ezinweleni, ukuvimbela izinwele ezomile, ezihlangene kanye nokuhlukaniswa nokuhlukana. Ngaphezu kwalokho, iphunga le-ginger elihlangene nephunga lamakha aphambili, ligcina iphunga ezinweleni isikhathi eside.
Intengo yesithenjwa: 680,000 VND/set.
3.3 Ipheya le-Biotin Collagen Shampoo – I-Collagen Pair Shampoo
Ipheya ye-shampoo ye-Biotin Collagen ibilokhu ifinyelela amazinga ama-shampoos ahamba phambili. Njengoba igama layo liphakamisa, isithako esiyinhloko se-Biotin Collagen shampoo kanye ne-conditioner yi-Biotin ene-Pro vitamin B7 ukusiza isimo nokubuyisela izinwele. Ngaphezu kwalokho, i-collagen iqukethe amaprotheni e-hydrolyzed akhuthaza ukukhula kwezinwele, aqinise imicu yezinwele futhi akhawulele ukuhlukaniswa kokuphela.
Ngaphezu kwalokho, kuthebula lokuqamba elithi I-Biotin Collagen Shampoo Ibuye ibe nama-amino acid abalulekile namaminerali akha ifilimu evikela izinwele. Ikakhulukazi, le shampoo yombhangqwana we-collagen ayinawo ama-parabens nama-sulfate.
Enye iphuzu elihlanganisayo ukuthi umkhiqizo unephunga elimnandi, futhi iphunga lihlala ezinweleni isikhathi eside. Ikakhulukazi, i-Biotin Collagen conditioner inamandla okuvuvukala izimpande zezinwele, idale umphumela wezinwele omkhulu.
Intengo yesithenjwa: 545,000 VND/isethi ye-385ml/ibhodlela.
3.4 I-Salon Link I-shampoo eyengeziwe yezinwele ezomile
Uma uzibuza ukuthi iyiphi i-shampoo yokumatanisa ongayikhetha, i-Salon Link Extra iyisiphakamiso esihle kakhulu. Lo mkhiqizo unamandla okuhlanza izinwele ngobumnene kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukususa umjuluko nokungcola ezinweleni ngaphandle kokumisa isikhumba.Ngenxa yalokho, ungakwazi ukunciphisa ukunotha kanye nezinye izifo zekhanda.
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwalo mkhiqizo kuyiprotheni ye-mercury kanye nenani lama-amino acid. Ngakho-ke, iyaziswa kakhulu ngekhono layo lokubuyisela ekujuleni kwezinwele. Ikakhulukazi, lo mkhiqizo uzofaneleka kakhulu izinwele ezilimele, unephunga elimnandi kakhulu uma lisetshenziswa.
Intengo yesithenjwa: 550,000 VND/ipheya.
I-3.5 HS Pair Shampoo
Uma unezinwele ezinokuqukethwe okuphezulu kwamafutha, khona-ke i-HS shampoo iyisinqumo esilungele wena. Ngaphezu kwalokho, leli pheya lama-shampoos linephunga eliqabulayo le-mint futhi linamandla okuhlanza isikhumba sekhanda kahle kakhulu. Ngakho-ke, umkhiqizo usiza ukunciphisa ukulunywa futhi uvimbele ukwakheka kwe-dandruff.
Ngaphezu kwalokho, izithako eziyinhloko zalo mkhiqizo ikakhulukazi amaprotheni, anekhono elihle kakhulu lokulungisa izinwele. Ngenxa yalezi zithako, izinwele zakho zibuyiselwe futhi zigcwele impilo.
Intengo yesithenjwa: 350,000 VND/ipheya.
Buka Okuningi: [Review] Ama-shampoos aphezulu ayi-6 ezinwele ezidayiwe agcina umbala oqinile namuhla
3.6 I-Grapefruit Valert Grapefruit Shampoo
Okulandelayo ku Ama-shampoos aphezulu angu-8 angcono kakhulu kwabesifazane Awukho omunye umkhiqizo i-Grapefruit Valert Grapefruit Shampoo. Umkhiqizo uqukethe izithako ezi-2 eziyinhloko: amafutha abalulekile we-grapefruit peel kanye ne-grapefruit flower essential oil.
Ngaphandle kwalokho, le shampoo ye-grapefruit ine-Vitamin E, i-Vitamin B complex, i-Vitamin H nezinye izithako ezisizayo. Ikakhulukazi, ayiqukethe ama-preservatives, ayiqukethe ama-colorants futhi ayinayo imiphumela emibi eyingozi.
Ukusetshenziswa okuvelele kwe ishampoo ye-grapefruit Lokhu kusekela ukuthuthukisa isimo sokulahlekelwa izinwele futhi ngesikhathi esifanayo ukusekela ukukhuthaza ukukhula kwezinwele, okwenza izinwele zibe mkhulu futhi zibushelelezi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo futhi ugcina amandla nobude bezinwele.
Intengo yesithenjwa: 300,000 VND/isethi ye-850ml/ibhodlela.
3.7 I-BEAUA ibhangqa i-shampoo enomnqumo ne-argan extracts
Enye yama-shampoos angcono kakhulu omile, amaphethelo ahlukene noma ama-scalp azwelayo yi-BEAUA Olive & Argan Oil Non Silicone Conditioner. Okokuqala, i-BEAUA Olive Olive & Argan Oil shampoo pair iqukethe amafutha omnqumo acebile ngamavithamini A, E kanye nama-acids anamafutha angena ajule emugqeni ngamunye wezinwele. Ngakho-ke, umkhiqizo usiza ukukhiya umswakama futhi udale isendlalelo se-keratin ukuvikela izinwele.
Ngaphezu kwalokho, isithako samafutha omnqumo sinomphumela wokugcina isikhumba sekhanda sifudumele futhi sivimbele ukwakheka kwe-dandruff, sinciphisa ukulahlekelwa izinwele. Ngaphezu kwalokho, amafutha e-argan agcina izinwele zicwebezela, azithambisa ngokujulile futhi athambise izinwele.
Ikakhulukazi, umkhiqizo uqukethe amaprotheni kasilika (usilika we-hydrolyzed) okhishwe emifeceni yemvelo ye-silkworm, equkethe inani elikhulu lama-amino acid alungele izinwele. Yilesi sithako esizosiza ukubuyisela izinwele ezilimele futhi sinciphise imiphumela eyingozi yokushisa nokukhanya kwelanga okukhulu.
Intengo yesithenjwa: 550,000 VND/set umthamo 550ml/ibhodlela.
Funda kabanzi: Ingabe i-TRESemme shampoo inhle njengoba izwakala? Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwezinhlobo ezi-3
3.8 YENZA I-Pair Shampoo
Okokugcina ohlwini lwama-shampoos angu-8 ahamba phambili ahamba phambili yi-DOVE conditioner enowoyela wehhashi, amafutha kakhukhunathi namafutha e-camellia.
I-shampoo kaDeve Inephunga elimnandi lezimbali, iletha umuzwa wokuphumula kumsebenzisi. Ngaphezu kwalokho, ukukhishwa kwamafutha ehhashi kunikeza umswakama obalulekile ezinweleni nasekhanda. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukwenza izinwele zicwebezele, kukhuthaze ukukhula kwezinwele futhi kunciphise ukuqhekeka kanye neziphetho ezihlukene.
Enye iphuzu elihlangene ukuthi amafutha e-camellia namafutha kakhukhunathi acebile e-palmitic, i-linoleic, engena ezinweleni ngokushesha, ezondla izinwele ngokukhanya okunempilo, hhayi okunamafutha. Ukusuka lapho, ukusiza ukwenza izinwele zibe ziningi futhi zibe zinde, zivikele izinwele emiphumeleni eyingozi yokushisa nemisebe ye-UV. Ikakhulukazi, i-shampoo ye-DOVE ayinayo i-silicone, ngakho-ke inobungane kakhulu ezinweleni.
Intengo yesithenjwa: 530,000 VND/isethi ye-480ml umthamo/ibhodlela.
Ngalesi sihloko esingenhla, kufanele ukuthi kukusize ukuthi uqonde kangcono amaphuzu avelele e-shampoo ebhangqwa. Ngethemba ngolwazi mayelana Ama-shampoos aphezulu angu-8 angcono kakhulu kwabesifazane Izokusiza ukwazi imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele ephumelela kakhulu namuhla
Top 8 kem đánh răng than hoạt tính chất lượng và tốt nhất | Muasalebang